रवीन्द्र अधिकारी पनि भ्रष्टाचारी? – NepalAustralianews.com
January 3, 2019 अर्थ / राजनीति
३ जनवरी २०१९, काठमाण्डौ- सत्तारुढ नेकपाले वाइडबडी प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा समितिको अन्तिम निर्णय र त्यसपछि आउने प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र आफनो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। वाइडबडी अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत दोषी ठहर्‍याउँदै कारवाही सिफारस गरेको छ।
कारवाही सिफारिस भएका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले उपसमितिको प्रतिवेदनवाट आफू अचम्मित भएको बताएका छन्। उनले समय क्रममा तथ्य खुल्ने पनि बताए। अन्नपूर्णसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन जुन ढंगले आएको छ, त्यसमा म अचम्मित छु। वाइडबडी खरिदमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। एक दिन समय आएपछि यथार्थ स्पष्ट हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी प्रकरणकै विषयमा पार्टी स्थायी समिति वैठकमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने बताएका थिए। वाइडबडी प्रकरणलाई प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उठाएपछि तुरुन्तै छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान थालिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
राजाभन्दा महंगी गणतन्त्रकि राष्ट्रपति? हेलिकप्टरबाटै कृषि अवलोकन
निश्चलको सम्झनामा शोकसभा गर्दै एनआरएनए एसए